Faa'iidooyinka usha MC naylon |
MC nylon rod, oo sidoo kale loo yaqaan rod nylon rod, waa nooc walxo ceeriin ah oo la dhalaalay, c6h11no, taas oo ah walxo ceeriin ah oo la dhalaalay, taas oo u adeegsanaysa waxyaabaha aasaasiga u ah sidii kalid. MC nylon rod iyo activator iyo waxyaabo kale oo lagu daro waxaa loo sameeyaa monomer si toos ah polymerized loogu sameeyo caaryada horay loogu diiriyay heerkul gaar ah. Maaddadu si dhakhso leh ayey ugu jajaban tahay caaryada oo waxay ku urursan tahay uur adag oo adag. Ka dib daaweynta habka ku habboon, baarka la sii cayimay ayaa la helaa. "Caag halkii birta, waxqabad aad u fiican", si ballaaran ayaa loo isticmaalay. MC nylon rod wuxuu ka samaysan yahay caddaan, madow, buluug, cagaar, saxan beige iyo naylon. Udurka nylon wuxuu leeyahay xasilooni kiimikaad oo wanaagsan: ma saameynayo kiimikooyinka, sida aalkolada, saldhig daciifka ah, naxaasta, Ester iyo saliida hydrocarbon. Udurka nylon wuxuu leeyahay qabow aad u fiican iyo iska caabin kuleylka: heerkulka iska caabinta kuleylka waa 80-100c, waxayna u hoggaansami kartaa xoog farsamo gaar ah - 60C.
Farsamaynta farsamadu sidoo kale waa mid aad u wanaagsan: waxayna leedahay culeys sarreeya, adkaanta dusha sare, foorarsiga xoogga iyo saameynta xoogga iyo ductility sare, oo ku habboon qaybaha waaweyn ee qoyska, oo si ballaaran loogu isticmaalo mashiinnada wax soo saarka warshadaha, qalabka, qaybaha korantada. Qaybaha, sida saa'idka, geerka, qalabka wax lagu rito, qalabka daboolka, saliida goomaha u adkaysata, qaybaha waalka, cabitaanka iyo makiinadaha cuntada, waxay ka samaysan yihiin dufan adkaysi, saameyn adkaysi leh, xabag aan nadiif ahayn, nadaafad iyo walxo aan sun ahayn si looga dhigo taatiko shaqeynaya boolal, fududahay in la nadiifiyo, cimri dherer, saameynta caariyaysi, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa maaddooyinka kale ee daryeelka caafimaadka, magaca duurka, iwm.
MC nylon ul wuxuu leeyahay adkeyn wanaagsan, xirashada iska caabin, saliida iska caabinta, caabbinta dhul gariirka, hoos u dhaca iyo xoog foorarsiga, nuugista biyaha oo hooseeya iyo xasiloonida cabbir wanaagsan Waxaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo qaybo kala duwan oo xoog badan oo daaqa u adkaysta. Badeecadu waxay leedahay noocyo badan oo codsiyo ah. Waa caag iyo bir tayo sare leh, bir, naxaas iyo walxo kale oo bir ah. Waa qalab farsamo oo muhiim u ah tuurista balaastigga injineernimada ballac ballaadhan, oo aan xirnayn qaybo, ma aha naxaas iyo wax laysku qurxiyo, maxaa yeelay waa xirmidda qalabka. Sida marawaxadaha, marshada, dhalida, kiciyaha, kaftanka, qalabka qalabka, mashiinka wadista, daab iyo fur, waalka cadaadiska, mashiinka dhaqda, fur, lowska, shaabad, baaburka iyo shaadhka, isku xiraha gacmaha waxaa laga samayn karaa usha MC.